» तीन जोडीलाई सर्वाधिक ३० अंक
तीन जोडीलाई सर्वाधिक ३० अंक
१६ आश्विन २०७७, शुक्रबार १६:०७
मकवानपुर, १६ असोज । विश्व प्रसिद्ध डान्सिङ रियालिटी शो ‘डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल’ को पहिलो साता ३ जोडीले ३० मा ३० अंक नै प्राप्त गरेका छन् । यी तिनै जोडीहरुले शोको दोस्रो एपिसोडबाट यो अंक प्राप्त गरेका हुन् । शनिबार प्रस्तुति दिएका प्रशान्त ताम्राकार र स्वयत्ना योञ्जन, सुमी मोक्तान र बिजु पार्की तथा ज्योति मगर र लाउरे सिंहको जोडीले ३० मा ३० अंक नै प्राप्त गरेका हुन् । यस शोमा पहिलो पटक ३० अंक प्राप्त गर्न सफल प्रशान्त ताम्राकार र स्वयत्ना योञ्जनको जोडीले सविन राईको ‘तिमी नै हौ’ बोलको गीतमा प्रस्तुति दिएका थिए । ल्याटिन रम्बा डान्स स्टाईलमा नाचेको यो जोडीलाई स्टेजमा ‘प्रयत्न’ नाम दिइएको छ । उनीहरुलाई निर्णायकहरुले स्टाण्डिङ अवेशन दिएका थिए । फेसन कोरियोग्राफीमा तहल्का मच्चाईसकेको यो जोडीले नृत्यमा पनि राम्रो कोरियोग्राफी पस्कन सफल भएका थिए । उनीहरुले निर्णायकहरुबाट पनि त्यसको प्रशंसा प्राप्त गरे । उनीहरुलाई तिनै जना निर्णायकहरुले १०–१० अंक गरी जम्मा ३० अंक प्रदान गरेका थिए । हेर्नुहोस् यो भिडियो फिचर–
त्यस्तै यस शोमा ३० अंक प्राप्त गर्ने दोस्रो जोडी सुमी मोक्तान र बिजु पार्की हुन् । एक्सनमा तहल्का मच्चाएकी नायिका र सुन्दर कोरियोग्राफरबिचको यो जोडीले निर्णायकहरुको मन जित्दै ३० मा तिसै अंक प्राप्त गर्न सफल भएको थियो । यो जोडीले प्रताप दासको ‘ए मेरो हजुर’ बोलको गीतमा प्रस्तुति दिएका थिए । उनीहरुले प्रस्तुतिका क्रममा फ्रि स्टाईल कन्टेम्प्ररी डान्स स्टाईल अंगालेका थिए । उनीहरुको प्रस्तुतिमा पनि तिनै जना निर्णायकहरुले स्टाण्डिङ अवेशन दिएका थिए । निर्णायकहरुले उनीहरुको प्रस्तुतिको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए । उनीहरुलाई स्टेजमा ‘सुबिजु’ नाम दिइएको छ । उनीहरुलाई तिनै जना निर्णायकहरुले १०–१० अंक गरी जम्मा ३० अंक दिएका थिए ।
यस शोमा ३० अंक प्राप्त गर्ने तेस्रो जोडी हो ज्योति मगर र लाउरे सिंहको जोडी । उनीहरुले स्टेजमा एउटा भावनात्मक पिडालाई नृत्यमा पस्किएका थिए । एउटा दम्पत्तिले आर्थिक अभावकै कारण छुट्टिनुपर्दाको पिडालाई उनीहरुले नृत्यको तालमा यसरी मिसाईदिएकी उनीहरुको प्रस्तुति हेरेर निर्णायक र दर्शकहरुको आँखा रसाए । निर्णायक गौरी मल्ल र दिलिप रायमाझीको गला अवरुद्ध भयो । उनीहरुसहित सहभागीहरुको आँखामा आँशु टिलपिल टिलपिल भएका थिए । साहुको ऋण, सन्तानको उज्जवल भविष्य र श्रीमान श्रीमतीको प्रेमबिच पलाएको पिडादायी वैदेशिक यात्राले कति पिडा दिन्छ भन्ने भावलाई उनीहरुले नृत्य मार्फत नै देखाएका थिए । नरेश खाती र समिक्षा अधिकारीको आवाजमा रहेको ‘माया मारेर’ बोलको गीतमा उनीहरुले कन्टेम्प्ररी डान्स प्रस्तुत गरेका थिए । भावनात्मक कथा बुनिएको यस नृत्यमा उनीहरुले निर्णायकहरुबाट ३० मा ३० नै अंक प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुको प्रस्तुतिमा निर्णायकहरुमात्र नभई प्रतियोगिताका प्रतिस्पर्धीहरुले पनि स्टाण्डिङ अवेशन दिएका थिए । निर्णायकहरुले गायिका ज्योति मगरबाट आसै नगरेको प्रस्तुति पाएका थिए । सधैँ हँसाउने गायिकाको भावनात्मक प्रस्तुतिले सबैलाई चकित पारेको थियो । ज्योति र लाउरेको नृत्य एक अभिव्यक्ति भएको भन्दै निर्णायहरुले उनीहरुको प्रशंसा गरेका छन् । उनीहरुलाई बुधबारसम्म आइएमई पेबाट भोट गर्न सकिन्छ । ज्योति र लाउरेको भोटिङ कोड ०६ हो । उनीहरुलाई स्टेजमा ज्योतिला नाम दिइएको छ ।
को पुग्छ उत्कृष्ट ५ मा ?
मिस पपुलर च्वाईसमा योजना, सन्ध्या र आयुश्माको टक्कर
यो हप्ता जोगिएलान् यी जोडीहरु ?
यति धेरै चर्चा, यति धेरै आलोचना
बुद्ध लामा र केबिका खत्री–सर्वाधिक हिट, सर्वाधिक अंक
डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालका उत्कृष्ट ६ जोडीहरु